NGC 6822 - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 19h 44m 56.6s, −14° 47′ 21″
NGC 6822 (ဘားနတ် ဂယ်လက်ဆီ၊ IC 4895 သို့မဟုတ် Caldwell 57 ဟုလည်း သိထား) သည် ပုံစံအတည်တကျမရှိသော ဂယ်လက်ဆီတစ်ခုဖြစ်ပြီး စင်တိရစ်ပ် ကြယ်စုတန်းမှ အလင်းနှစ်သိန်းပေါင်း ၁.၆ ကွာဝေးသည်။ ယင်းသည် Local Group ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကာ E. E. Barnard ဆိုသူမှ ခြောက်လမရှိသော ရီဖာရေတာ တယ်လီစကုပ်ဖြင့် ၁၈၈၄ ခုနှစ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် တခါတရံတွင် သူ့နာမည်အားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဘားနတ် ဂလက်ဆီဟု ခေါ်တွင်သည်။ နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီနှင့် နီးကပ်သော ဂယ်လက်ဆီတစ်ခုဖြစ်ပြီး သေးငယ်သော မက်ဂျစ်လစ် တိမ်တိုက်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ ဆင်တူသည်။ ယင်းသည် အချင်းအားဖြင့် အလင်းနှစ် ၇၀၀၀ ရှိလေသည်။
19° 44′ 56.6″
−14° 47′ 21″
-၅၇ ± ၂ km/s
၁.၆၃ ± ၀.၀၃ Mly (၅၀၀ ± ၁၀ kpc)
15′.5 × 13′.5
Barnard's Galaxy, IC 4895,
DDO 209, PGC 63616, Caldwell 57
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဖြင့် မြင်ရသော NGC 6822
NGC 6822 ထဲမှ ကြယ်ဖွဲ့တည်ရာဌာနီ
NGC 6822 ထဲမှ ကြယ်တာရာထုတ် စက်ရုံကြီးတစ်ခု
ESO ၏ Wide Field Imager ဖြင့်မြင်ရသော NGC 6822
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ ၁.၇ ၁.၈ ၁.၉ "NASA/IPAC Extragalactic Database"၊ Results for NGC 6822၊ 2007-03-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
Cannon၊ John M.; Walter၊ Fabian; Armus၊ Lee; Bendo၊ George J.; Calzetti၊ Daniela; Draine၊ Bruce T.; Engelbracht၊ Charles W.; Helou၊ George; et al. (December 2006)၊ "The Nature of Infrared Emission in the Local Group Dwarf Galaxy NGC 6822 as Revealed by Spitzer"၊ The Astrophysical Journal၊ 652 (2)၊ pp. 1170–1187၊ arXiv:astro-ph/0608249၊ Bibcode:2006ApJ...652.1170C၊ doi:10.1086/508341
Hubble၊ Edwin P. (December 1925)၊ "NGC 6822,aremote stellar system"၊ Astrophysics Journal၊ 62၊ pp. 409–433၊ Bibcode:1925ApJ....62..409H၊ doi:10.1086/142943
Karachentsev၊ I. D.; Karachentseva၊ V. E.; Hutchmeier၊ W. K.; Makarov၊ D. I. (April 2004)၊ "A Catalog of Neighboring Galaxies"၊ Astronomical Journal၊ 127 (4)၊ pp. 2031–2068၊ Bibcode:2004AJ....127.2031K၊ doi:10.1086/382905
Karachentsev၊ I. D.; Kashibadze၊ O. G. (January 2006)၊ "Masses of the local group and of the M81 group estimated from distortions in the local velocity field"၊ Astrophysics၊ 49 (1)၊ pp. 3–18၊ Bibcode:2006Ap.....49....3K၊ doi:10.1007/s10511-006-0002-6
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=NGC_6822&oldid=519240" မှ ရယူရန်
၇ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၁၇:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၇ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၁၇:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။